Gunyana 12, 2018 arun
Huobi anowana marezinesi Japanese crypto Exchange BitTrade
Huobi Group ndiko richikura ayo zvokutengeserana minamato kuJapan Via chinhu nokukurumidza ngaakuitirei kutenga vemunzvimbo marezinesi cryptocurrency Exchange BitTrade. BitTrade pari mumwe 16 marezinesi exchanges kuJapan uyewo nhengo vokuJapan Virtual Currency Exchange Association.
Huobi mukuru zvemari mukuru, Chris Lee, akataura kuzviwanira: “Leveraging pamusoro BitTrade kutungamirira chikwata chacho rezinesi nehurumende vanotenderwa Japanese, ichi anongova mavambo sezvatinotarisira kukura BitTrade kupinda anonyanya mutambi ari Japanese cryptocurrency pamusika.”
Major crypto Makambani vanoumba DC lobbying boka
Vanoverengeka blockchain mari, exchanges uye startups kuronga vanoedza Washington, DC zvemitemo pamwe itsva Blockchain Association. Sangano iri itsva kuti pfungwa zvose dzidzo uye zvemitero kuchinja sorutivi Achiedza normalize ukama pakati crypto startups uye vanoita zvemitemo, Kumirira anonzwisisa murau. Coinbase, denderedzwa, Digital Currency Group, Polychain Capital uye Protocol Labs vari pakati Association dzakavamba nhengo.
Mumwe vashandi yokutanga sangano iri vaimbova Seneti mubetseri uye Overstock.com blockchain lobbyist ainzi Kristin Smith. Iye akaudza Post kuti iye wakaramba “tungamirira” sangano sezvachinotanga kunze, vachiti, “Ndanga kupedza nguva yakawanda tichiita yakawanda chikuru basa rokudzidzisa muchadenga ichi … Ndiri kufara kuti pfungwa chete panyaya iyi.”
Kraken Daily Market Mushumo 11.09.2018
Criminal shure $ 1.8M cryptocurrency kuba rakatarisa 10 makore
Justice akunda kuti kurohwa mubatwa uye ugororo, sezvo munhu seri $1.8 miriyoni rakapotsa mari kuba vanotarisirwa kuti andotongerwa 10 makore shure nembariro. sezvinei, pakupedzisira munhu apukunyuka wevakamusunga. akakuvadza, Louis Meza, zera 35, chokwadi “shamwari” pamwe wacho aiziva kuti akanga yakawanda Eteri inochengetwa chikwama chake kumba kwake. Meza, uye 3 kuti nevarwi vake kubirwa wacho.
The matsotsi akaisa Hood pamusoro omuJudha musoro uye vakabata naye kwemaawa akawanda. Ivo vakamumanikidza kuti unzi musha wake makiyi uyewo ake “crypto makiyi” (inodiwa kuti kuwana ake cryptocurrency chikwama.) The matsotsi ipapo vakaputsanya mumba akuvara uye vakaba kuyeuka tsvimbo yaiisirwa crypto ake. Zvinosuruvarisa kuti hoodlums, vakanga vabata pamusoro zvokuongorora vhidhiyo kuita mhosva. Munhu wacho akakwanisa kutiza uye kumhanya kuti pedyo ndibhadhare mari muchitoro apo akadana 911. Manhattan District Attorney Cyrus Vance Jr. akati “Louis Meza zvokuronga munhu rechi21-remakore rutanda-up. Ipapo vaongorori rechi21 remakore vakamusvitsa kutumira kururamisira, asunga munhu raikosha mukuda imwe undeveloped nzvimbo mutemo.” Louis Meza akanga arayira kuti kurasikirwa ~ $ 100,000 zvemadhenari munyu zviratidzo & 84 BitCoins (~ $ 500,000). Pakupedzisira, munhu ndapukunyuka uye cryptocurrency ake akaporazve.
Jeffrey Francis · GUNYANA 6, 2018